UMNYANGO WEZOLIMO WOKUTAKULA AMAPULAZA AKWAZULU NATAL – Sivubela intuthuko Newspaper
UNGQONGQOSHE weZolimo KwaZulu Natal, uNkk Bongi Sithole-Moloi uMnyango wakhe wethule uhlelo lokubhekelelwa kwezidingo zamapulaza.
UMNYANGO wezoLimo KwaZulu Natal usunikele ngemali engu-R58 million kumapulaza akulesi siFundazwe ngenhloso yokuwafukula.
Lolu xhaso olubonakala luzothela izithelo ezinhle kakhulu luqininisekiswe nguNgqongqoshe wezoLimo KwaZulu Natal, uNkk Bongiwe Sithole Moloi. UMoloi udalule ukuthi angu-57 esewonke amapulaza aKwaZulu Natal agixabezwe ngale mali.
UNgqongqoshe uMoloi uthe lolu xhaso belubheka kakhulu lawo mapulaza abonakala edinga kakhulu ukwesekwa ikakhulukazi ngakwezezimali.
“Kuyinto emqoka kakhulu ukulekelelwa kwamapulazi ikakhulukazi ngezezimali.Angingabazi nje nakacane ukuthi le mali izoba usizo olukhulu kwona wonke amapulaza azothola le mali,’’kugcizelela uNgqongqoshe.
UNgqongqoshe udalule ukuthi uMnyango wakhe awuholayo weZolimo kulo nyaka nje uwodwa uhlose ukuthi ulekelele amapulaza angu-157. Uthe akangabazi ukuthi lokhu kuyothi kusongwa unyaka kuyobe sekwenzekile.
Abasebenzi bepulaza laseMooi River, iGugulethu Farm elingelinye labalwa nahlomulile bazwakakise ukubonga kakhulu kuMnyango weZolimo ngalolu izo.
UNksz Sebenzile Dladla ongomunye oyilungu laleli pulaza ubonge wanconcoza kakhlu kulo Mnyango ngalolu xhaso.
“Siyawubonga kakhulu uMnyango weZolimo waKwaZulu Natal ngokusigixabeza ngemali ezosilekela kakhulu ekutheni sikwazi ukuqhuba umsebenzi wethu omkhulu lapha epulazini,’’usho kanjena.
Leli lunga lithe leli pulaza labo ligxile kakhulu ekutshaleni imifino, amaklabishi nokunye okuningi okuwukudla okunempilo. Leli pulaza lona linyelwe yinyoni esandleni njengoba ligixabezwe ngengxenye ka-R57 million okungu-R3million.
“Ngale mali angifuni ukuqamba amanga kuningi kakhulu esikwazile ukuthi sikwenze ngempumelelo kuleli pulazi lethu. Okunye esikwenzile kube ukuthenga isiqandisi esisha sokugcinwa kokudla kwethu esikudayisayo,’’usho kanjena.
Elinye ipulaza elithole uxhaso lwemali yokufukulwa yiGugulethu Farm uMoloi uthe ufuna ukubona leli pulazi lidlondlobala futhi lisungula namathuba emisebenzi.